I-Eko Pearl Tower Modern 2-Bedroom Apartment - I-Airbnb
I-Eko Pearl Tower Modern 2-Bedroom Apartment
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguChiBuzor
I-92% yeendwendwe zakutshanje inike uChiBuzor iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo yokuhlala yabucala e- kwindawo ephucukileyo ephakamileyo ngaphakathi kwiSixeko sase-Eko Atlantic - umoya opholileyo kunye nokuzikhupha edolophini kwiingingqi ezinabantu abaninzi eLagos. Yonwabela ukubona ulwandle olungenabungozi, okanye uhambahambe kwindawo ebalaseleyo egudle ulwandle olukhuselwe yiDubai. E-Eko Pearl Towers, uza kufumana zonke izinto ezinokusetyenziswa kwihotele yobunewunewu kuquka ipuli enobukhulu beOlimpiki phezu kwetreyini ephakamileyo enomoya edibanisa iivenkile zokutyela eziyi-2 eyadini.
Le ndawo yokuhlala ye-Eko Pearl Towers inobukhulu obuphindwe kayi-3 behotele eqhelekileyo, inendawo yokuhlala eyahlukileyo, amagumbi okulala ayi-2 anamagumbi okuhlambela angasese, ikhitshi elipheleleyo elinezixhobo zeBosch, indawo yokuhlamba iimpahla kunye nendlu yangasese yondwendwe. Igumbi lokuhlala elinefenitshala elincinci likhaya ibe livuleleke kwibhalkoni enkulu yabucala, apho unokubona iVictoria Island kunye noLwandlekazi lweAtlantiki. Abasebenzi abacoca indlu bayafumaneka kwisayithi kwaye balungele xa kufuneka ukunceda ukugcina yonke loo ndawo icocekile kwaye icocekile.
I-Eko Pearl Towers ikhutshelwe kude nesiphithiphithi saseLagos, kodwa ikufuphi kakhulu ne-Ikoyi, isithili seshishini saseMarina, iLekki, i-Eko Hotels kunye neZiko leNgqungquthela kunye nazo zonke iindawo ezikhethwa yiVictoria Island yeendawo ezisebenzisanayo, iinketho zokutyela, ubomi bobusuku obumangalisayo kunye nentlalontle. imiboniso. Indawo yokuhlala esetyenziselwa izinto ezixubeneyo ingaphakathi kwesiXeko esitsha sase-Eko Atlantic, ummandla obanzi womhlaba obuyiselweyo kuLwandlekazi lweAtlantiki kwiprojekthi enkulu yokulungiswa komhlaba eyandisa into ebifudula ibizwa ngokuba yiBar Beach.
Umbuki zindwendwe ngu- ChiBuzor
Idesika yethu yokwamkela iindwendwe kwisakhiwo ivuliwe kwaye ivuliwe imini nobusuku (Ext. 100 kwi-intercom). Ababuki zindwendwe be-IndonesiaYCH bayafumaneka ukuba baye nakweyiphi na isicelo sondwendwe ngoWhatsApp/ngeSMS.